Global Voices teny Malagasy · 26 Septambra 2010
26 Septambra 2010
Tantara tamin'ny 26 Septambra 2010
Aostralia: Adihevitra momba ny fiakanjo Silamo
Oseania26 Septambra 2010
Nangatahan'ny ben'ny tanàna ny mponina any ambanivohitr' i Melbourne any Aostralia mba hanao akanjo manarona ny vatany mandritra ny lanonana ao amin'ny dobo filomanosana mba tsy hanohinana ny Silamo. Niteraka adihevitra tamin'ny aterineto izany baiko izany
Inde: hilefitra ve i Kashmir? Sa mety hisy ny fampihavanana ?
Azia Atsimo26 Septambra 2010
Nandefa delegasiona matanjaka ahitana mpanao lalàna avy amin'ny antoko politika maro an'isa ny governemanta Indiana afovoany mba hanamaivana ny fandatsahan-drà sy ny fifanoherana any amin'ny faritr'i Jammu sy i Kashmir . Taitra ihany koa ny tontolon'ny bilaogy Indiana taty afara mikasika ity olana ity ary mizara ireo hafany mikasika ny...
Mila ny fanohananao ny mpikatroka Tailandey voasambotra taorian'ny #IAL2010!
Thailandy26 Septambra 2010
Voasambotra tao amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tao Bangkok Suvarnabhumi i Chiranuch Premchaiporn, mpitantana ny Prachatai. Niverina avy tany amin'ny Dinidinika “Aterineto ao amin'ny Fahalalahana 2010: Ny Fampanantenana sy ny loza mety hihatra amin'ny Fahalalahana Miteny” natao tany Bodapesta ny mpanao gazety sy mpanohitra ny fanivanana iray (@Jiew ao amin'ny twitter). Mitondra...